ဘာကြောင့် ပိန်လွန်းရတာလဲ . . . – Healthy Life Journal
ဘာကြောင့် ပိန်လွန်းရတာလဲ . . .
မေး။	။ ခန္ဓာကိုယ်က အရမ်းကို ပိန်လွန်းတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါရှင်။ ရောဂါမရှိဘဲပိန်နေလို့ပါ။
ဖြေ။	။ ပုံမှန်စားနေပါလျက်နဲ့ ရောဂါအထူးအထွေ မခံစားရဘဲ ပိန်ပိန်ပါးပါးဖြစ်ရုံဆို ဘာမှမဖြစ်ပါ။ အ စားအသောက်ကို မျှတပြည့်စုံအောင် စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အစာစားပြီး ပိန်လွန်းနေရင်တော့ တချို့ဟော် မုန်းတွေ ဥပမာ- သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများနေရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
Related Items:skinny, thin
ပိန်လွန်းလို့ ပြည့်ချင်ပါတယ် . . .